Mutungamiri weEswatini anofa neCOVID-19 muchipatara cheSouth Africa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Eswatini Breaking News » Mutungamiri weEswatini anofa neCOVID-19 muchipatara cheSouth Africa
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Eswatini Breaking News • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Ambrose Dlamini, Mutungamiriri weEswatini, uyo akaongororwa aine hutachiona coronavirus masvondo mana apfuura, akashaya ave nemakore makumi mashanu nemaviri mushure mekuradzikwa muchipatara muSouth Africa yakavakidzana, hurumende diki yemadzimambo yakati Svondo yapera.
“Majesties avo akaraira kuti ini ndizivise nyika nezvekusuwa kunosuwisa uye nekukurumidza kwaMukurumbira Prime Minister Ambrose Mandvulo Dlamini. Changamire vafa masikati ano vachiri pasi pekurapwa mune chimwe chipatara muSouth Africa ”, Mutevedzeri weGurukota VaThemba Masuku vakadaro muchitauriri.
Dlamini akaendeswa kuSouth Africa muna Zvita 1, kuti "atungamire uye akurumidze kupora," kubva ku COVID-19. Panguva iyoyo, Masuku akati Dlamini aive akatsiga uye achipindura zvakanaka pakurapwa.
Dlamini akagadzwa semutungamiriri wenyika muna Mbudzi 2018, zvichitevera chinzvimbo chake semukuru maneja weMTN Eswatini. Akange ashanda mumabhizimusi emabhangi kweanopfuura makore gumi nemasere, kusanganisira kuve maneja maneja weEswatini Nedbank Limited.
Nyika yekumaodzanyemba kweAfrica inosvika vanhu vanosvika miriyoni imwe nemazana maviri kusvika parizvino yakanyora zviitiko zvinosvika zviuru mazana matanhatu nemazana matanhatu neshanu zvechirwere chekufema chinotapukira, ne1.2 yakasimbiswa kufa, sekureva kwebazi rezvehutano.
Cuthbert Ncube, Sachigaro we African Tourism Bhodhi akatumira nyaradzo kumhuri yemutungamiriri wenyika, achiti izuva rinosuwisa kuAfrica nekushanya. Dr. Taleb Rifai, aimbova Secretary General weUNWTO uye Patron weATB, vakatsigira izvi pamwe nevatungamiriri pasi rese.